Ummanni Mursii lafa isaa irraa buqqa’aa jiraachuun gabaafame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Ummanni Mursii lafa isaa irraa buqqa’aa jiraachuun gabaafame
Jiruufi jireenni ummata Mursii balaa keessa bu’eera, akka gabaasa BBC tti. Akkuma ummata naannoo biroo, ummanni Mursiis lafa bu’uurri jireenni isaanii irratti bu’uureffame irraa buqqa’utti jiru. Qonna shankooraaf babal’aaf bakka gadi dhiisuu qaban kan jedhu sababni. Dachii hiddi isaanii irratti marge, abbaafi ilmi irratti ufarge, jiruufi jireenni isaanii irratti bu’uureffameen gargar bahaa jiru.
Lafaafi bu’uurri jireenna isaanii, horsiisuu, kan geeddaramuuf sababa lamaaf: imaammata safaraafi hidhaa laga Gibeeti. Hidhaan laga Gibee kophaa isaatti bishaan dachii Mursii irra woggaa woggaan guutaa cambalaqu hir’ise. kunis qonna isaan qarqara laga Oomoo irratti geggeessan dhabamsiise.
Dhimmichi kuni dhimma baay’ee rakkisaafi woldhabsiisaadha. Keessumattuu rakkoo ummata lafa irraa buqqa’aa jiranii mootummaan Itoophiyaa dhagayuu hinfedhu. Kanaaf mootummaan oduu lafa irraa buqqa’uun wolitti hidhata qaban hunda ukkaamsa, jedha BBCn. Gareen mirga namoomaaf falmanis imaammata mootummaa kana irra deddeebi’anii qeeqaa turan: mootummaan mirga jirattotaa sarbe, ykn akka imaammata kana fudhataniifis jiraattota dirqeera jechuudhaan.
‘Mootummaan horii keenna akka gurgurruufi jireenna isa worra magaalaa fakkaatu akka jiraannu nutti hima. Lafti keennas kan kubbaaniyaa shukkaaraati jedha. Maal akka barbaannu hingaafatamne, fedhiin keennas hineegamne. Karoora safaraa hinfudhannu taanan nihidhamna. Lafa, horiifi bishaan dhabnee akkamitti jiraanna?’ jedhe manguddoon Mursii tokko yoo barreessaa BBC tti rakkoo keessa jiran odeessu.
Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi’ee kan lafa isaanii irraa humnaan buqqa’an akka hinjirre ibsa. Sababni qonna ammayyaa babal’isuufi lagggeen hidhuus misoomaaf ta’uu addeessa.
Ummanni Mursii sulula Omoo nannoo laga Maraa, Omoofi Mago jiraatu. Sabni Mursiin nannoo 10,000 tilmaamamu.
Previous articleGareen Bokoo Haraam ijoollee 40 ukkaamse fudhate
Next articleYaaliin perezidaantii Gaambiyaa Yahyaa Jameeh fonqolchuuf godhame fashale